Guddiga Joogtada ah ee Xildhibaanada DFS oo go’aan lama filaan ah kasoo saaray Dooda Qalbi-dhagax & Kheyre oo… | Baahin -News, Sports, Views, Entertainment, War On Terror, Health and Social Affairs
Guddiga Joogtada ah ee Xildhibaanada DFS oo go’aan lama filaan ah kasoo saaray Dooda Qalbi-dhagax & Kheyre oo…
Guddiga joogtada ah ee aqalka hoose ee baarlamanka Soomaaliya ayaa go’aan ku gaaray in baarlamanka uu dood ka yeesho kiiska Cabdikariim Qalbi-Dhagax oo dowladda Soomaaliya ay u gacan gelisay dowladda Ethiopia.
Doodda ayaa la filayaa inay billaabato maalinta berri, sida xubno ka tirsan guddiga ay sheegeen.
Sida xildhibaanno dhowr ah ay xaqiijiyeen, dhammaan xildhibaanada baarlamanka ayaa loo diray farriin loogu sheegay inay u diyaar garoobaan in arrimaha uu baarlamanka ka hadlayo berri ay qeyb ka noqon doonto arrinta Qalbi-Dhagax.
HOOS KA DAAWO SIYAASADA DFS EE QALBI-DHAGAX
Go’aankan ayaa imanaya ayada oo dhowr jeer ay baaqdeen kulamadii baarlamanka, kadib markii kooramka uu buuxsami waayey, arrintaas oo lagu eedeeyey xukuumadda inay ka dambeysay.
Kulanka baarlamanka ee berri ayaa keeni kara in baarlamanka ay go’aamiyaan in tallaabada ay dowladda ku gacan gelisay Qalbi-Dhagax ay ahayd sharci darro, taasi oo hoggaamin karta in codka kalsoonida loo qaado xukuumadda.
Dowladda Soomaaliya ayaa culeys weyn oo siyaasadeed kala kulantay dhiibitaankii Qalbi-Dhagax, oo ay ku eedeysay inuu xiriir la lahaa Shabaab, islamarkaana uu falal amni darro ka waday dalka, taasi oo ONLF ay beenisay.